ဗစ်​တိုးရီးယား အမှု တကယ်ပဲ​ ပြီးဆုံး သွားပြီ လား? – Shwe Ba
ဘယ် အ ချ�...
ဗစ် တိုးရီးယား အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လာလာမေးကြတယ်။ အမှုက ပြီးသွားပြီဆို…၊ ဘာမှ လုပ်မရဘူးလား၊ ဒီအတိုင်းပဲ ပြီးသွားတာလား။ ငြိမ်နေတယ်နော်၊ ဘာညာ ဘာညာ၊
တချို့က အားမလို အားမရစိတ်နဲ့ မေးတာ ဖြစ်သလို၊ တချို့ကျ (ဒီကောင်တွေ ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ) ဆိုတာမျိုးဆွချင်တဲ့ အခံနဲ့ မေးတာတွေ ရှိတယ်။ ဒီဘက်က တမင်ငြိမ်နေတာကို နားမလည် ပါးမလည် လာလာမေးကြသူတွေ ရှိတယ်။ ထားပါတော့…
(၁) ဗစ်တိုးရီးယား အမှုလို့ ပြောရင် ကျွန်တော်တို့ ခံယူတာက (သမီးလေး အမှန်တရား ရရေး လှုပ်ရှားမှု) ကိုပဲ ကျွန်တော်တို့ ပြောတာ။ အောင်ကြီးကို ရဲတပ်ဖွဲ့က စွဲဆိုထားတဲ့ အမှုသည် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့က အောင်ကြီးကို တရားရှင် လွှတ်လိုက်ခြင်းနဲ့အတူ ရုံးချိန်းတွေ ရပ်သွားပြီ။ ဒါပေမယ့် ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ပြင်ဆင်ချက်နဲ့ တက်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့အတွက် ရက်ပေါင်း ၆၀ ပြည့်မယ့် ၁၈.၂.၂၀၂၀ အထိ စောင့်ရမယ်။ စောင့်ရမယ့် ကိစ္စကို စောင့်တာက အောင်ကြီးအမှု ပြီးမပြီး စောင့်တာပဲ ဖြစ်တယ်။ ဗစ်တိုးရီးယား အမှန်တရား ရရေး ရှာဖွေမှု ရပ်တန့်သွားတာ မဟုတ်ပါ။
(၂) ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ ဆိုတော့ …. အင်း၊ မပြောဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘယ်သူတွေ ဘာလုပ်ဦးမလဲ မသိလို့။ ၀ယ်လင်တန်ကိုလား မသိဘူး။ စစ်ပွဲကို ဘယ်လိုတိုက်မှာလဲ လာမေးတယ်။ ဟင်… စစ်ပွဲက ငါက စတာမဟုတ်ဘူးကွ။ နပိုလီယန် စတာ။ ဒီတော့ သူက မြောက်ဘက်က တိုက်ရင် ငါက တောင်ဘက်က ခုခံရမှာ။ သူက တောင်ဘက်က တိုက်ရင် ငါက မြောက်ဘက်က ခုခံရမှာ..တဲ့။ (မှားရင် ပြင်ပေးပါ။ သဘောတရားလေးပဲ ယူတာ) ဒီတော့ ဘယ်သူတွေ ဘာလုပ်မယ်မှန်း မသိပဲ ဆင်ဖမ်းမယ် ကျားဖမ်းမယ် အော်နေလို့ မရပါဘူး။ တခုပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ရပ်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ စောင့်နေတာပါ။
(၃) အမှန်တရားက ဘာလဲဆိုတာ ဘွားဘွားကြီး မမြင်ရရင်တောင် ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို လိမ်လည်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို အားလုံးသိအောင် ချပြနိုင်ခဲ့တာပဲ။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို ရှောင်သွားတယ်ဆိုတာလည်း ကျွန်တော်တို့ ပြောစရာမလိုပဲ မြင်ကြမှာပါ။ ဟိုဟာ မပြင်ရသေးလို့၊ ဟိုဟာက ဟိုအောက်မှာ မရှိလို့ လို့ လာပြောကြသူတွေလည်း စိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ အစကတည်းက ပြည်သူကိုပဲ အားကိုးခဲ့တာပါ။
(၄) သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားအတွက် အမှန်တရား ရှာဖွေရေးသည် မပြီးပြတ်သေးဘူး ဆိုတာပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရပ်တန့်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာလည်း ပြောချင်ပါတယ်။
ထိန်းချုပ်ဓာတုဆေးရည်များ တင်ဆောင်လာသူ (၂)ဦးကို မူဆယ်- မန္တလေးသွား ကားလမ်းပေါ်တွင် ဖမ်းဆီးမိ
သ ဘောဖြူ မနောဖြူပြီး စိတ် ရင်း ကောင်း လွန်း တဲ့ သူမ ရဲ့ အေ ကြာင်း လေး ကို သီချင်း လေး နဲ့ တကွ ဂုဏ်ပြု ခံခဲ့ ရတဲ့ ဖြူဖြူထွေး